Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo Tobabar Xuquuqal-insaanka Hargeysa uga Furay Kooxo Suxufiyiin ah | Berberanews.com
Home WARARKA Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo Tobabar Xuquuqal-insaanka Hargeysa uga Furay Kooxo...
Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo Tobabar Xuquuqal-insaanka Hargeysa uga Furay Kooxo Suxufiyiin ah
Hargeysa-(Berberanews)- Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA, ayaa maanta Tobabar ku saabsan Xuquuqal-insaanka uga furay Hudheelka Summer Time ee magaalada Hargeysa15 suxufi oo ka hawlgala warbaahinta kala duwan.
Agaasimaha Guud oo hadal ka jeediyay furitaankii Tobabarkan oo socon doona muddo 5 maalmood ah, iskana kaashadeen Ururka Suxufiyiinta SOLJA iyo Wakaallada Wararka Qaramadda Midoobey IRIN , waxa uu ka hadlay kaalinta saxaafaddu ka qaadato dhismaha iyo nabadda dalka, “Tobabarkani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay suxufiyiinta waana mid loo baahnaa, waayo waxaynu nahay dall curdin ah oo u baahan dhisme aqooneed. Saxaafadda Somaliland waa mid xor ah waxaanay kaalin weyn ka soo qaadatay dhismaha dalkan, hadii ay noqoto nabadda iyo dhimaha dimuqraadiyadda.”ayuu yidhi Agaasimuhu.
Agaasimuhu waxa uu ka hadlay xilka dawladda ka saaran ilaalinta saxaafadda iyo dadka, waxaannuuu u soo jeeday warbaahintu inay noqoto mid markasta dhex u ah dhinacyada ay wax ka qoraan iyo ilaalinta qaranimmada Somaliland, isagoo arrintaa ka hadlaya waxa uu yidhi, Dawladda Somaliland xil gaara baa saaran; waxaana weeye inay masuulliyadeeda ilaaliso kana shaqayso horrumarka dalka iyo ka saxaafadda oo wixii laga sheegana ay saxdo, saxaafadana waxaa waajib ku ah inay si habboon u adeegsato mihnadeeda oo ay baahiso warar dheeli tiran oo la hubo laakiin maaha saxaafaddu inay baahiso wax aan dheelitirnayn oo dhinac u janjeedha.
Saxaafadda Somaliand waxay dhaqan u lahayd ilaalinta qarannimada iyo waxa danta guud ah waayo, nabadda iyo wadajirka inagaa ku nool oo wax ku ah.”
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Faysal Cali Sheekh waxa uu ammaan u diray Ururka Suxufiyiinta SOLJA, isagoo ballanqaaday inuu xidhiidh dhow la yeelan doono SOLJA, “Wasaarad ahaan waxaa noo qorshaysan inaanu xidhiidh wanaagsan la yeelano saxaafadda, gaar ahaan Ururka Saxafiyiinta Somaliland ee SOLJA oo aan ku amaanayo waxqabadka ay illaa hadda sammeeyeen.”
Xasan M Yusuf
Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA Mr. Xasan Maxamed Yuusuf oo furitaankii aqoon-korodhsiga hadal ka jeediyay, ayaa saxafiyiinta u soo jeediyay inay ka faa’iidaystaan mudada uu tobabarku socda, islamarkaana waxa uu ugu bushaareeyay ka qaybgalayaasha inay dhawaan bilaabmayaan tobabato xidhiidha oo kor loogu qaadayo tayadda suxufiyiinta Somaliland.
Xoghayaha Guud ee Ururka SOLJA, Maxamed Rashiid Muxumed Faarax oo isna hadal ka kooban ka jeediyay Hoolka Tobabarkan, ayaa sheegay inuu tobabarkani muhiimad gaar ah u leeyahay suxufiyiinta, gaar ahaan inay bartaan habka loo tebiyo shacdooyinka Xuquuqal-insaanka. Waxaannu u mahadceliyay Wakallada IRIN.
Previous articleMaamulka Dawladda hoose ee Berbera oo soo bandhigay waxqabadka sannadka 2011, shacabkana fursad u siiyay suaalo.Video
Next articleSomaliland: Isu soo baxyo waaweyn oo lagu taageerayo Qaddiyadda Madaxbannaanida iyo jiritaanka Qaranka, lagagana soo horjeedo Kooxda Macaash-doonka Cali-khalliid ee Marin-habaabisay Shirdhaqameedkii Taleex